यसरी पत्ता लगाए सिन्धुपुत्र कसजूले विश्वमै नयाँ वनस्पति - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ पर्यटन ∕ यसरी पत्ता लगाए सिन्धुपुत्र कसजूले विश्वमै नयाँ वनस्पति
यसरी पत्ता लगाए सिन्धुपुत्र कसजूले विश्वमै नयाँ वनस्पति
Sindhu Khabar बिहीबार, २०७७ जेठ ८ / १७:४२
नयाँ पत्ता लागेको वनस्पति थुनबर्जिया कसजूआना र इन्सेटमा बैज्ञानिक कसजू
१३ अगस्ट २०१६ मा घुम्दै पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट पुगेका सिन्धुपाल्चोक चौताराका सरोजकुमार कसजूले एउटा ‘सानो लहरे’ विरुवाको फोटो क्लिक गर्दा सोचेका थिएनन् होला कि यही वनस्पति विश्वमै नयाँ जातिको हुनसक्छ ।
सानैदेखि नौला खाले विरुवाप्रति शौख राख्ने कसजूले खिचेको त्यही फोटोले अहिले विश्व किर्तिमानी राखेको छ, ‘संसारमै नयाँ वनस्पति’ को ।
वनस्पति विज्ञानमा रुचि राख्ने वैज्ञानिक सरोजकुमार कसजूले नगरकोट क्षेत्रमा फेला पारेका विरुवा विश्वमै नयाँ भएको पुष्टि भएको हो । कसजूले पत्ता लगाएको विरुवाको नाम ‘थुनबर्जिया कसजूआना’ राखिएको छ । बेलायतको रोयल बोटानिक गार्डन एडिनबरा (आइबीजीई) ले विरुवाको नाम राखेको हो ।
झण्डै दसकदेखि विरुवाको फोटो खिचेर विभिन्न वनस्पति परीक्षण गर्ने स्थानमा उनले थालेका थिए । सन् २०११ बाट आफूले विरुवाको फोटो खिच्न थालेको उनी बताउँछन् । २०१४ साल माघ २५ गते जिल्ला सदरमुकाम चौताराको पुरानोबजारमा जन्मिएका उनले श्रीकृष्ण विद्याश्रम प्रारम्भिक शिक्षा सुरु गरेका थिए । सानै उमेरदेखि वनस्पति प्रेममा झुम्मिने गरेका सरोजकुमारले राजधानीस्थित पद्मोदय माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे । अमृत साइन्स क्याम्पसमा अध्ययन गर्दैगर्दा उनमा झन् विरुवाप्रति उत्सुक बढेको थियो ।
‘इच्छा धेरै हुन्थ्यो, तर त्यतिबेला खर्च धान्न सकिएन,’ उनी विगत स्मरण गर्छन्, ‘रिल सिस्टमको क्यामेरा हुने र खिचिएका सबै फोटो धुलाउनु पर्ने हुँदा निकै गाह्रो हुन्थ्यो ।’ उनले विरुवाको फोटो खिच्थे अनि रमाउथे मात्रै । खप्तड बाबाको पुस्तक ‘विचारको ज्ञान’ उनले अध्ययन गरेपछि उनको विरुवाप्रतिको शौख मात्रै नभई वनस्पति जीवनले ‘यूटर्न’ लियो । सो पुस्तकमा औषधिजन्य विरुवाहरुको बैज्ञानिक नामहरु थियो । उनले त्यतिबेला सोचे, ‘नेपालमा हजारौं विरुवा छन्, पहिचानको जरुरी छ ।’ यही सोचलाई पूर्णतामा बदल्दै सरोजकुमारले विभिन्न विरुवाहरु पहिचान गरेर नेपाली र अंग्रेजी नामको सूची तयार गरे । विरुवाको तस्वीर प्रेममा रमाएका कसजूले त्यतिबेला सोनीको डिजिटल क्यामेरा किनिसकेका थिए ।
विरुवाको फोटो खिचेर संक्लन गर्नृे मात्रै नभई उनले विभिन्न पुस्तकलगायतहरु अध्ययन, अनुसन्धान गर्न थाले । अध्ययनकै क्रममा विरुवाहरुको पहिचान गर्ने अनलाइन साइट उनले फेला पारे । भारतबाट सञ्चालित ‘इफोरा इन्डिया गुगल ग्रुप’को उनी सदस्य बने । उनी २०१४ मा यो ग्रुपको सदस्य बनेका हुन् । यो ग्रुपमा वनस्पति विज्ञान अध्ययन गर्नेहरु मात्रै हुने गर्दछन् । इफोरा ग्रुपमा नियमित नयाँ नयाँ विरुवाका फोटोरु पठाउने र पोस्ट गर्ने गरेका कसजूले यो नयाँ प्रजातिको विरुवालाई थुनबर्जिया लुथिया भनेर फेस्ट गरेका थिए । संसारभर वनस्पतिमा अध्ययन गर्नेहरुको साझा फोरमजस्तै रहेको यो ग्रुपमा कसजूले पोष्ट गरेको फोटोप्रति चर्चा भयो । कसजू विरुवाहरुको फोटो पोष्ट गर्ने र अनुसन्धान गर्नेमा यो ग्रुपमा रहेका संसारभरका बैज्ञानिकमा तेस्रो वरियतामा पर्छन् ।
उक्त ग्रुपमा थिए नेपाली डाक्टर भाष्कर अधिकारी । थुनबर्जिया नामक वनस्पतिका विशेषज्ञसमेत रहेका अधिकारीले कसजूसँग सम्पर्क गरे । उनले त्यतिबेला भनेको शब्द कसजू स्मरण गर्छन्, ‘यो विश्वमै नयाँ प्रजातिको विरुवा हुन सक्छ ।’ इफोरा ग्रुपबाटै चिनजानमा आएका डा. अधिकारीको यो भनाईले उनमा थप उत्सुकता बनायो । फलस्वरुप उनी उक्त लहराको फोटो लिएको स्थानमा पटक पटक पुगे । २०१६ मा फोटो पोष्ट गरेपछि पछिल्लो चार वर्षका अधिकांश समय उनले यही विरुवालाई समय खर्चिएका थिए । उनले यस विरुवाबारे अध्ययन अनुसन्धानमै चार वर्ष बितेको बताए ।
नयाँ पत्ता लागेको वनस्पतिमा फुलेको फूल
विश्वमै नयाँ प्रजातिको हुन सक्ने सम्भावना बढेसँगै कसजूले त्यसको फूल, फल, पात, डाँठलगायत सबैको फोटो खिचेर पठाए । नयाँ हुनसक्ने भएपछि सन् २०१९मा विशेषज्ञ डा. अधिकारी स्वयम् नगरकोट आइपुगेको कसजू बताउँछन् । ‘उहाँ आफै आएर हेर्नुभयो, अनि आवश्यक डकुमेन्ट तयार गरियो ।’ डा. अधिकारी स्वयम्ले वनस्पति अवलोकन गरेर फर्केपछि विश्वभरमै रहेका अन्य परीक्षणकर्ता र बैज्ञानिकहरुले यसबारे अनुसन्धान गरेको कसजू बताउँछन् । डा. भाष्कर अधिकारी र जोन उडले त्यस विरुवाको थप अध्ययन गरेर बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘क्यू बुलेटिन’ नामक जर्नलमा लेख छपाएपछि विरुवाको औपचारिक पहिचान मिलेको थियो ।
विभिन्न स्थानबाट यो थुनबर्जियाकै नयाँ प्रजाति भएको पुष्टि भएको हो । यसलाई बेलायतमा रहेको रोयल बोटानिक गार्डेनल अफ् क्यूले नयाँ जाति रहेको यो साता पुष्टि गरेको हो ।
यो विरुवा ५ मिटरसम्म लामो हुन्छ । सुरुमा कसजूले फोटो खिच्ने बेला सिंगो नगरकोटमा यसको एउटा मात्रै विरुवा थियो । दुई वर्षपछि झण्डै ३, ४ सय मिटरको फरकमा थप तीन विरुवा फेला परेको उनको भनाई छ । अगस्ट महिनामा फूल फुल्ने यो विरुवाबाट हुन सक्ने औषधिबारे परीक्षण भइरहेको छ ।
‘संसारको विभिन्न देशमा नागरिक वैज्ञानिकहरुले वनस्पतिशास्त्रको अध्ययनमा निकै योगदान पुर्याएका हुन्छन्’, आइबीजीईमा कार्यरत डा. अधिकारीले भने– ‘तर नेपालमा नागरिक वैज्ञानिकले नयाँ प्रजातिको विरुवा भेट्टाउने कुरा विरलै हो । हामी कसजूप्रति आभारी छौं ।’ अधिकारीका अनुसार एसियाको भारत र भुटानमा पनि पाईने सो जातिका विरुवा नगरकोटामा फेला पारेकोजस्तो प्रजातिको नभएको र पहिचान समेत गरिएको थिएन । कसजूले त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट डीपीए र एमपीए गरेका छन् । २०३३ सालबाट नेपाल बायुसेवा निगममा संलग्न कसजू त्यहाँको वाणिज्य विभागको निर्देशक समेत भए ।